यो वर्ष पनि हिन्दु धर्मावलम्बीले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो चाड–दसैं धुमधामका साथ मनाएका छन् । सरकारले यही समयमा सबैभन्दा लामो बिदा दिने हुनाले देशभरिका लाखौँ मानिस आफ्ना आफन्त र प्रियजनाई भेट्न गाउँ घरबाट सहर फर्कदैं छन् ।
दसैं मान्न काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै २६ लाख मानिस आआफ्नो गाउँ–बस्ती गएको अनुमान छ । दसैंमा जति अरु कुनै पर्वमा अत्यधिक संख्यामा मानिस आ–आफ्नो थातथलोमा फर्किने गर्दैनन् । यस हिसाबले दसैं धार्मिक पर्व मात्र रहेको छैन, सामाजिक मिलनकारी चाडमा रुपान्तरित भएको छ ।
दसैंको सामाजिक पक्ष जस्तै आर्थिक पक्ष पनि ठूलो छ । नेपाल उसै पनि आफ्नो आयको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा उपभोगमा सिध्याउने मुलुक हो । राष्ट्र बैंकले हालै गरेको सर्भेक्षणले नेपालीहरूले आफ्नो आयको ८६ प्रतिशत उपभोगमा खर्च गरिसक्छन् भन्ने देखाएको छ । त्यो उपभोगमध्ये पनि सबैभन्दा ज्यादा उपभोग दसैंको दसैं दिनमा हुने गर्छ ।
दसैं त्यो अवधि हो, जतिखेर आम नेपालीको गोजीमा सामान्य बेला भन्दा ज्यादा पैसा हुन्छ । तलबका अतिरिक्त एक महिनाको अतिरिक्त दसैं भत्ताका कारण, व्यापार ब्यवसायमा अत्यधिक बृद्घिका कारण, दसैंका लागि भनेरै साँचिने वर्षभरिको कृषि आयको बचतको कुल योगका कारण सबैको गोजीमा पैसा हुन्छ ।
जब गोजीमा अत्यधिक पैसा हुन्छ, खर्च र महँगा सामानको फर्माइस त्यही बमोजिम हुने गर्छ । आम नेपालीले सबैभन्दा ज्यादा रेफ्रिजरेटर–टिभी, लुगाफाटो, माछामासु, मादक पदार्थ तथा स्वादिष्ट खानेकुरा किन्ने यही अवधिमा हो । यस हिसाबले फगत डेढ साताको दसैं भनेको झण्डै पौने एक खर्बको अर्थतन्त्र हो ।
जहाँ देशको कुल वार्षिक बजेट नै १५ खर्बकोे छ । यस हिसाबले दसैं भएका पर्वमध्येको सबैभन्दा खञ्चुवा चाड हो । तर नेपाल त निम्नमध्यम वर्गको अधिक्य भएको र पाँचमा एक मानिस गरिबीको रेखामुनि भएको मुलुक हो । औकात जे जस्तो भए पनि खर्च त त्यो वर्गले पनि बाध्यतावश गर्नुपर्ने जान्छ । उनीहरूको कोणबाट दसैंैँ थप दुर्दशा र ऋणमाथि ऋण ल्याउने चाड पनि हो ।
आदर्श पुरुष को ?
दसैं रामको लंक बिजयसँग सम्बन्धित पर्व हो । रामले रावणमाथि बिजय प्राप्त गरे । त्यसैले उनको इतिहास लेखियो । इतिहास जहाँ पनि बिजेताकै मात्र लेखिन्छ । तर युद्घमा हारेको रावणको कोणबाट हाम्रो देशमा त्यति बहस– छलफल–अध्ययन भएको छैन । आचार्य चतुरसेनको ‘वयं रक्षामः’ भन्ने प्रख्यात उपन्यास नेपालमा त्यति पढिएकै छैन जसले रावणको व्यक्तित्वमाथि सोच्न एकचोटि हरेक मानिसलाई बाध्य बनाउँछ ।
नेपालमा धेरैले पढेको रामायणलाई नै आलोचनात्मक तवरले अध्ययन गर्ने हो भने पनि केही प्रश्न स्वभाविक तवरले उठ्छन् । रावणकी बहिनी शूपर्णखाले रामलाई देखेपछि उनको रुप र व्यक्तित्वबाट प्रभावित हुनु र आफूलाई मनपरेको रामलाई ‘आई लभ् यू’ भन्नु उनको नाकै काट्नुपर्ने हदको भूल थियो ? के यसमा आदर्श पुरुष भनिएका रामले ज्यादती र अन्याय गरेका होइनन् ?
राजा रावणकी बहिनी शूपर्णखाको अन्यायपूर्वक नाक काटेको प्रतिशोध लिन रावणले सीताको अपहरण गरे । यसमा रावणले पनि रामको नाक वा हात काटेको भए भइहाल्थ्यो नि, किन निर्दोष सीताको अपहरण गरेको ? भनेर भन्न सकिएला । यसलाई रावणको ज्यादती पनि भन्न सकिएला । तर रामले सीतालाई अपहरण गरे पनि उनलाई त्यति लामो अवधिसम्म आफ्नो दरबारको परिधिमा रहँदा समेत बलात्कार त गरेनन् । बरु सेवा गर्ने दासीहरू समेत दिएर सुरक्षित र सकुशल राखे, जब कि उनीसित जुन व्यक्तिगत बल र राज्यशक्ति थियो । त्यो प्रयोग गरेर उनले कैयन् पटक बलात्कार गर्न सक्थे ।
यसबाट रावणको व्यक्तिगत नैतिकस्तर उच्च थियो भन्ने देखिँदैन ? यस पृष्ठभूमिमा रावणले सीतालाई बलात्कार नगरेको र सकुशल सुरक्षित राखेको हनुमानले आफ्नै आँखाले देखेपछि रामले युद्घ गरेर रावणलाई मार्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? हनुमानले किन लंका दहन गर्नु पर्यो ?
राम अहंकाररहित आदर्श पुरुष हुन् भने एकपटक अनावश्यक ढंगले राजकुमारी शूपर्णखाको नाक काटेकोमा रावणसित क्षमायाचना गरेर सीतालाई फिर्ता लाने विकल्पमा जानु उचित र आवश्यक थिएन र ? त्यसो गर्दा पनि सीतालाई रावणले सहजतापूर्वक नसुम्पे पो युद्घ गर्नु न्यायपूर्ण र जायज हुनजान्थ्यो ।
यसरी हेर्ने हो भने राम–रावण युद्घ न्यायपूर्ण र आवश्यक देखिँदैन । यो रामको अहंकारको लडाइँ मात्र देखिन्छ । तर हामी तिनै रामको बिजयमा बिजयादशमी भनेर दसैं मनाई रहेका छौँ । यस परिप्रेक्ष्यमा बिजया दशमीको ऐतिहासिक जगमा नै आजको नयाँ पुस्ताले फेरि एकचोटि फर्केर पुनःसमीक्षा गर्नु र प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ ।
कुनै पुरुषलाई सुन्दर र आकर्षक देखेर ‘आइ लभ् यू’ भन्दा अनायास नाक काटिदिने राम आदर्श पुरुष कि अपहरण गरेकी महिलालाई समेत बलात्कारको शिकार नबनाएर सकुशल सुरक्षित राखिदिने रावण आदर्श पुरुष ? आफूले शूपर्णखामाथि अन्याय गरेकोमा क्षमा नमागेर आफ्नी श्रीमती सकुशल र सुरक्षित राखेको मान्छेमाथि नै बाण ठोक्ने राम उदाहरणीय पुरुष कि बाण ठोकेर मरणान्त घाइते बनाई सकेपछि पनि उनै रामको भाइलाई अन्तिम महत्वपूर्ण शिक्षा दिने रावण उदाहरणीय पुरुष ? यी सोचनीय प्रश्नहरू हुन् ।
हामी यहाँ रामको पूजा गछौँ, दक्षिण भारतमा त्यस्ता ठाउँ अझै छन् जहाँ रावणको पूजा गरिन्छ ।
धर्मनिरपेक्षता र टीका
२०६३ सालदेखि नै नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्यमा परिणत भएको हो । धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको राज्य धर्मबाट अलग्गिने तथा धर्मको मामिलामा तटस्थ बस्ने भनेको हो । जुन राज्य धर्मबाट अलग्गिन्छ, उसको आफ्नो धर्म हुँदैन । साथै, सबै धर्मलाई उसले समान व्यवहार गर्छ ।
यस्तो स्थितिमा धर्म भनेको व्यक्तिगत मामिला हुन पुग्छ । कम्युनिस्ट पार्टी शासनमा वा अस्तित्वमा छ भने उसले पार्टीगत तवरले धर्मको मामिलामा द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादको आलोकमा आम नागरिकलाई धर्मबारे चेतना दिने काम लगातार गर्छ । तर यसमा बलको प्रयोग हुँदैन ।
परन्तु नेपालको राजनीतिक बिरोधाभास के देखिएको छ भने धर्मनिरपेक्ष देशका ‘कम्युनिस्ट’ राष्ट्रपति सामन्ती राजाको शैलीमा राज्यका पदाधिकारी, नेता–कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई आफूसमक्ष झुक्न लाएर टीका लाउन अग्रसर देखिन्छन् । दसैंैँको ऐतिहासिक जगमाथि नै प्रश्न नउठिसकेका असचेत मानिसले आफूभन्दा ठूलाकहाँ आशीर्वाद माग्न टीका लाउनु बेग्लै कुरा हो । तर राजाकहाँ वा ठूला पदाधिकारीकहाँ टीका लाउने चलन सामन्ती निरकुंशतन्त्रकालीन चाकडीको एउटा लज्जाजनक रुप हो । साथसाथै यो हिन्दु राजतन्त्रको स्पष्ट संकेत पनि हो ।
परन्तु नेपालको बिडम्वना यो हो कि, देश एक दशकअघि नै गणतन्त्रमा गइसक्यो र डेढ दशकअघि नै धर्मनिरपेक्ष राज्य भईसक्यो । तर पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई यो क्रान्तिकारी परिवर्तनको कुनै अनुभूति नै नभएझै उनीहरू अझै पुरानै महासामन्त शैलीमा हिन्दु राज्यको ढाँचामा दसैमा टीका लाउँदैछन् । यो राष्ट्रिय लाजको पराकाष्ठा हो । यस्तो पुरातन र बेठिक प्रचचलनलाई अविलम्व रोक्नु आवश्यक छ ।
दसैंमा मात्र होइन, हाम्रा देशमा महामहिम राष्ट्रपति अरु बेलामा पनि आफ्नो राजकीय हैसियतमा राज्यशक्ति प्रदर्शित गर्दै कहिले मत्स्येन्द्रनाथको जात्रामा भोटो देखाउन पुगेकी छिन् त कहिले कृष्ण जयन्तीमा कृष्ण मन्दिरको दर्शन गर्न ।
गएको तीजमा भगवान शिवको दर्शन गर्न नेपालका राष्ट्रपति पशुपतिनाथको मन्दिरमा झुल्किइन् भने हालसालै दसैंमा पलाञ्चोक भगवतीको मन्दिरमा भगवतीको पूजा गर्न पुगिन् । यो भन्दा ठूलो दार्शनिक/सैद्धान्तिक र राजनीतिक हरिबिजोग अरु के हुन सक्छ ? राज्य एकातिर धर्मनिरपेक्ष हुने, त्यो राज्यको संविधानले सर्वाधिक सम्माननीय बनाएको पदाधिकारी–राष्ट्रपति चाहिँ राजकीय हैसियतका साथ केवल हिन्दु राष्ट्रपति भएको व्यवहार प्रदर्शित गर्ने ? यो धर्मनिरपेक्ष राज्यका राष्ट्रपतिका लागि सुहाउने व्यवहार नै भएन ।
राज्यका कुनै पनि सर्वोच्च पदाधिकारीको व्यक्तिगत श्रद्धाका आधारमा खास आराध्यदेवप्रति श्रद्धा हुनसक्छ वा पटक्कै नहुन सक्छ । श्रद्धा नभए समस्या नै भएन । यदि छ भने उनले आफ्नो श्रद्धा भएको आराध्यदेवको व्यक्तिगत हैसियतमा सर्वसाधारणझैँ भएर दर्शन वा पूजापाठ गर्न सक्छन् । त्यसमा कसैलाई आपत्ति हुने वा हुनुपर्ने कुरा भएन ।
धर्मनिरपेक्ष राज्यमा त्यो श्रद्धा राजकीय हैसियतमा राज्यशक्तिको प्रदर्शन गरेर कदापि प्रदर्शित हुनुहुँदैन । परन्तु राज्यको उच्च पदमा भएका मानिसलाई सर्वसाधारण जस्तो लाइन लागेर, पालो पर्खेर पूजापाठ गर्नु व्यावहारिक तवरले, समय र सुरक्षाकै कारणले पनि सम्भव हुँदैन । त्यसैले पदमा रहुञ्जेल आफ्नो आस्था आफैंसित सुरक्षित राखेर, आआफ्नो पूजापाठ आफ्नै घरको हाताभित्र गर्नु वा गोप्य रुपमा सुरक्षाको आवश्यक प्रवन्ध मिलाएर अनुकूल समयमा व्यक्तिगत तवरले आफ्नो आस्थाको थलोमा जाने नीति अपनाउनु पर्छ ।
धर्मनिरपेक्ष राज्यमा मुख्य कुरो राज्यको कुनै खास धर्मप्रति लगाव वा पूर्वाग्रह छैन र सबै धर्म राज्यका नजरमा बराबर छन् भनेर राज्यको पदमा बसेका हरेक पदाधिकारीले मन, वचन र कर्मले देखाउन सक्नु हो । त्यस्तो गर्न नसके राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्नुको कुनै तुक हुँदैन ।
धर्मनिरपेक्ष राज्यको हैसियतले राष्ट्रपतिले स्वयम् उपस्थित भएर मत्स्येन्द्रनाथको रथमा चढेर भोटो देखाउने र इन्द्रजात्रा देखाउने प्रचलन देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गर्नासाथ बन्द गरिसक्नुपर्ने हो । सामन्ती राजतन्त्रकालीन र राजतन्त्रकै सर्वोच्चता प्रदर्शित गर्ने यी प्रचलन गणतन्त्रकालीन राज्य र धर्मनिरपेक्ष राज्यका लागि सुहाउने कुरा नै होइनन् ।
तर अचम्मको कुरा, ती विरोधाभाषपूर्ण प्रचलन अझै बाँकी छन् । ती र त्यस्ता अरु धेरै प्रचलनलाई वर्तमान नेकपाको सरकारले अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ । आम जनताको श्रद्घा भएसम्म भोटो जात्रा, इन्द्र जात्रा वा त्यस्तै अरु धेरै जात्रा भइ राखून् । तर तिनीहरूमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर होइन, राज्यको कुनै अंग तिनीहरूमा मिसिएर पनि होइन ।
सबै धर्मलाई राज्यले समान ब्यवहार गर्ने हो भने नेपालका धार्मिक विदाहरूमा पनि पुनर्विचार गर्न ढिला भइसकेको छ । नेपालका सबै मुख्य धर्मलाई राज्यले बरोबरीको ब्यवहार गर्दै हिन्दु चाडलाई मात्र दिइएको लामो भेदभावपूर्ण बिदा छोट्याउँदै एक साताको बिदा केवल नयाँ बर्ष र संविधान दिवसका दिनबाट सुरु हुने गरी दिने प्रचलन सुरु गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज २५, २०७६, ११:१०:००
ओली ‘ट्रयाप’मा प्रचण्ड सकस